Guddiga Difaaca Suxufiyiinta (CPJ) oo soo saaray hagaha suxufiga oo afsoomali ku qoran – Voice of Somalis In Exile
Guddiga Difaaca Suxufiyiinta Committee to Protect Journalists ayaa soo saaray nuqul af-soomali ku tarjuman oo ku saabsan, talooyin wax ku ool ah oo la siinayo suxufiyiinta ka howlgala goobaha aan nabad-gelyadooda la isku hubin.
Talooyinkan oo hore loo heli jiray iyagoo ku qoran luuqado kale oo Ingriisigu ka mid yahay ayaa iminka lagu diyaariyey Af-Soomaali ka dib markeey badatay khatarta ay ku shaqeeyaan suxufiyiinta Soomaaliyeed.
Qoraalka talooyinkan ayaan cinwaan looga dhigay, Hagaha Amaanka Saxafiyiinta ee CPJ.
Uncategorized Amina Mussa Wehelie Amina Muuse Weheliye CPJ; Guddiga Difaaca Suxufiyiinta; Somali Journalists Somali jornalists Suxufiyiinta Soomalida